Ukuhlelwa Kwezezimali - Abenzi bezigidi
Ikhasi lami lesampula
Abantu namabhizinisi amancane
Sinikeza ngezixazululo ezenziwe ngezifiso nezincomo Zabantu Bodwa / Imindeni / Amabhizinisi Amancane ..
Uhlelo Lokutshalwa Kwezimali Olwenzelwe Abatshalizimali
Ukufika kwelinye izwe kungumsebenzi wethu oyinhloko. Lokhu kusho ukuthi amakhasimende ethu asebenza nabasebenza kakhulu kwezomthetho abanolwazi. Isinyathelo ngesinyathelo Ukusondela njalo kulandelwa.
Vula Uhlu nensizakalo eyenziwe ngezifiso. Ukuthenga noma ukuthengisa noma ukuqasha ifulethi / indlu / ihhovisi / isitolo / ibhizinisi / umhlaba wezolimo / ihhotela / ihostela.
Ukwakhiwa kwenkampani, i-Virtual Office, ama-Akhawunti Outsourcing, ukubhaliswa kweTrademark, isixazululo se-HR eyenziwe ngezifiso sonke endaweni eyodwa.
Ukuxhasa ngemali imishini yakho kukuvumela ukuthi ulondoloze imali yakho kwezinye izidingo zebhizinisi. Sebenzisa inethiwekhi yethu eqinile nesipiliyoni.
Konke kwenziwa lula: Ama-Akhawunti Atholakalayo Ngokwezimali, Okwakha Okutholakalayo Okutholakele, Ukuxhaswa Kwezimali Kokuhweba.
Ukuvulwa kwe-akhawunti yasebhange kwenziwa lula noma kuphi ku-The World. Inkampani yethu imelene ngokuphelele nokuLawulwa kweMali, ukuHanjiswa kweziDakamizwa kanye nokuThengiswa kwaBantu, ngakho-ke, Asiwaxhasi amaklayenti anjalo.
Ukuxhaswa ngezimali kanye nokusebenza kwezezimali
Izinsiza ezingeziwe zenani, zikuvumela ukuthi ubheke amakhono akho angqobo. Ilungele amabhizinisi amasha nezinhlangano eziqala ku-Jurisdictions entsha.
Izinkokhelo & Amaphakheji Ezabasebenzi
Ngisho nochwepheshe abasebenza ngokucophelela nabanolwazi kakhulu bathola, imali ekhokhwayo ingaba yikhanda. Kuyinkambu ekhethekile, ngakho-ke ochwepheshe mabayiphathe.
Sisiza amabhizinisi ekusebenziseni okungahambisani nawo ukuze asizakale futhi ajike wonke amabhizinisi abo.
Ukuqashelwa kwebhizinisi kuyisici esibucayi ngokuya ekuhlelweni okukhulu kwezezimali, intela, ukubika, ukuhlanganiswa nokutholwa, njll.
Ukuhamba kwemingcele kuya ngokuya kubaluleke kakhulu ekusebenzeni kwebhizinisi emhlabeni wonke. Ochwepheshe bethu benza kube lula kumakhasimende ethu.
Insizakalo eyodwa yazo zonke izingqinamba Zezomthetho, NGOKUZWE. Sine-bind-ups yamabhizinisi ngamazinga okuxoxiswana ngawo kakhulu nama-Lawyers, Legal Firms and Associations.
Amathuba webhizinisi lamanye amazwe
Izixhumanisi Eziluncedo Kumalayisense Wensizakalo Yezezimali